यी हुन महिलाका सबैभन्दा संवेदनशील ९ अंग ! जहाँ छोएपछि यौनिक उत्तेजना बढ्छ |
यी हुन महिलाका सबैभन्दा संवेदनशील ९ अंग ! जहाँ छोएपछि यौनिक उत्तेजना बढ्छ
२०७५, २५ जेष्ठ शुक्रबार २१:२४ June 8, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी : पुरुषहरु सँधै सोचिरहन्छन् महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील भाग कुन् ? अधिकाँश पुरुषको आँखा पर्ने अंगहरु बाहेक अन्य अंगहरु पनि यौनिकरुपमा निक्कै संवेदनशील मानिन्छन् ।कतिपय अंगमा पुरुषको आँखा परि हाल्छ भने कतिपय अंगमा भने छोएपछि यौनिक उत्तेजना बढ्ने हुन्छ । यस्ता अंगहरु कुन् कुन् हुन् त ?
भलै मुस्कान अंग होइन तर पुरुष स्त्री सम्बन्धमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । पुरुषलाई घाइते पार्ने महिलाको सबैभन्दा घातक हतियार भने मुस्कान हो । मुस्कानले पुरुषहरु पग्लिन्छन् । मुस्कानले पुरुषहरुलाई उत्तेजित पनि पर्छ ।
‌ओंठ यौनिक हिसावले र सौन्दर्यको हिसावले दुवै हिसावले महत्वपूर्ण अंग हो । ओंठमा चुम्बन गर्दा स्त्रीहरु सबैभन्दा उत्तेजित हुन्छन् भने पुरुषहरु पनि महिलाको ओंठमा ध्यान दिन्छन् ।
महिलाका बक्षस्थल सेकेण्ड्री यौन अंग पनि हुन् । किन भने यौन सम्बन्धको समयमा बक्षस्थलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्त्रीको शरीरमा हुने अंग मध्ये बक्षस्थल सबैभन्दा संवेदनशील अंग पनि हो
महिलाको पुट्ठो अर्थात अंग्रेजीमा बट भनिने भाग पनि निक्कै संवेदनशील मानिन्छ । यो अंगप्रति पुरुषको पनि विशेष आकर्षण हुन्छ । यौन सम्बन्धमा उत्तेजनामा समेत यो भागको भूमिका हुन्छ